Atumatu Social Media na Ebe Ọrụ | Martech Zone
Wenezde, August 10, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Nke a bụ ihe na-akpali infographic na ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ media atumatu. Ọ bụ ihe mara mma mara mma mana, dị ka ọtụtụ mkparịta ụka mmekọrịta ọha na eze ọ na-elekwasị anya na nchedo akara, na-akwalite ụdị, ma ọ bụ nnwere onwe ndị ọrụ. Nsogbu bụ na e nwere ihe ọzọ nnukwu ohere dị n'etiti na Infographic na-emetụ na ma ọ dịghị abanye zuru ezu banyere…
Ikike ịntanetị na ndị ọgbọ, ndị ọkachamara, ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-enye ohere maka ụlọ ọrụ iji nye ma wepu ozi ngwa ngwa. Kama ịnọdụ ala na ekwentị ma ọ bụ ịnwa ịgụ site na akwụkwọ na enyemaka faịlụ, ndị ọrụ gị nwere ike ịntanetị ma jikọọ na ndị ọrụ ndị ọzọ, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị ndụmọdụ iji nweta ozi ha chọrọ iji rụọ ọrụ ahụ.
Nakwa, enwere ike iji ya maka mbanye, nyocha asọmpi, nyocha, mmekọrịta ndị ahịa… enwere ọtụtụ uru na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ! Na 70.7% nke ụlọ ọrụ na-egbochi saịtị mgbasa ozi mmekọrịta, enwere ohere di egwu maka ulo oru gi ime ka ha di nma site na iji dibia.
The other factor to note here… na smartphones na abụọ-ọbula ibu, ụlọ ọrụ na-aghọgbu onwe ha site na-eche na ha na-egbochi mmadụ mgbasa ozi na saịtị. Nke a na-echetara m ezigbo ụbọchị nke ịntanetị, ebe naanị ndị ọrụ di na nwunye nọ n'ọnọdụ kachasị mkpa nwere ịntanetị ma ndị ọzọ ga-eji nwayọ rụọ ọrụ na crappy. Intranet. Naanị anyị hapụrụ ya niile wee kpọọ Solitaire kama.
Gini mere n'uwa n'eme ka igbochi ndi oru gi na ndi ozo ndi ozo? Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị nọ na Facebook ma dịrị arụpụtaghị ihe, nke ahụ abụghị ihe Facebook ma ọ bụ okwu nchekwa, nke ahụ bụ arụmọrụ arụmọrụ… gbaa ha ọkụ! Ezigbo ndị isi na-ewepụ mgbochi, ọ bụghị tinye ha.
Ntughari site na Infographic:
Taa, ụlọ ọrụ na-emejuputa atumatu mgbasa ozi mmekọrịta nke ụdị na nha niile - ọ bụghịkwa ihe ijuanya kpatara: kwa ọnwa anyị na-anụ ọdachi PR ọzọ n'ihi otu tweet na-efu. Nke a emeela ọtụtụ ụlọ ọrụ machibidoro iji soshal midia eme ihe mgbe ndị ọrụ nọ n'ọrụ. Mana ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbaso ụzọ dị iche, na-ekwenye na ọgbọ nke etolitere na teknụzụ na-arụpụta ihe karịa mgbe enyere ha ohere iji ya mee mkpebi nke aka ha.
Inweta gị n'Internationalntanet International na Search